रोचक - Vibes Nepal
Vibes Nepal / आइतबार, साउन ३१, २०७८
लोकप्रिय भिडियो शेयरिङ एप टिकटकले खासगरी किशोरावस्थाका प्रयोगकर्ताको स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका लागि भन्दै विभिन्न नयाँ फिचरहरु घोषणा गरिरहेको छ । एक नयाँ फिचर अनुसार अब १३ देखि १५ वर्ष उमेर समूहका टिकटक प्रयोगकर्ताले रातको ९…
Vibes Nepal / मङ्गलबार, साउन २६, २०७८
रोचक। यौनावस्थाका महिलाहरु शारीरिक रुपमा आकर्षक हुन्छन् । बयस्क हुँदा उनीहरुको शरीरको बनावट वा अंगमा केही न केही परिवर्तन देखिन्छ । बाह्य वा भित्र प्रजनन् अंगमा बृद्धि भएको हुन्छ । प्राय: युवती 'हरुमा १६/१७ बर्षको…
Vibes Nepal / बिहिबार, असार ३१, २०७८
मेरो नाम सेहिना हो र म नियमित हस्तमैथुन गर्छु । के तपाईं गर्नुहुन्छ ? यद्यपि महिलाहरुमा हस्त मैथुनका सम्बन्धमा उति धेरै चर्चा हुँदैन । के उनीहरु हस्तमैथुन बारे खुलेर कुरा गर्छन् ? म २४ वर्षकी…
JULY, “The most dominating and statistically important bullish month within the history of Nepal Stock Market’’
The common question among majority investors, that is that the most bullish month in NEPSE? Though stocks are briefly term correction for previous couple of weeks, investors have an honest news: July is that the…
Vibes Nepal Team / शुक्रबार, असार १८, २०७८
धेरैलाई राति अबेरसम्म निन्द्रा लाग्दैन। निद्रा बोलाउनका लागि केही मान्छे घन्टौंसम्म ओछ्यानमा यता र उता पल्टिन्छन्। ‘लौन, कुनै जादू मन्त्र पाएदेखि फुस्स निदाउँथें नि’ भनेर कल्पन्छन् यस्ता मान्छे।यस्ता मान्छेका लागि एउटा जादू उपाय आएको छ…
५ दिनमै आफ्नो कालो अथवा घामले पोलेको अनुहारलाई गोरो बनाउनुहोस् , निकै सजिलो १० घरेलु तरिका !
Vibes Nepal / मङ्गलबार, असार १५, २०७८
काठमाडौं। मानिस आफ्नो अनुहार सकेसम्म गोरो बनाउन प्रयासरत हुन्छन् । बजारमा पाइने विभिन्न प्रकारका गोरो बनाउने क्रिमहरुको प्रयोगले छालामा नराम्रो असर पर्नसक्छ । अनुहारमा चमक पाउनको लागि हामी महँगा क्रिमहरुको प्रयोग गर्ने गर्दछौं । तर…
Vibes Nepal / सोमबार, जेठ ३१, २०७८
Rheumatoid Arthritis (RA) and osteoporosis are the most painful diseases that older adults often suffer from. While these conditions are quite different, they can sometimes get lumped into the same category. This is especially true…
के हो महिनावारी कप भनेको? यो कसरी महिलाहरुको रोजाईमा पर्दैछन्? एकपटक किनेपछि १२ बर्षलाई ढुक्क
काठमाडौ : काठमाडौं महानगरपालिका ३१ नयाँ बानेश्वरकी सम्झना बानियाँले महिनावारी भएको समयमा स्यानिटरी प्याड प्रयोग गर्न छोडिसक्नुभएको छ । उहाँले दुई बर्ष यता महिनावारी कप प्रयोग गर्दै आउनुभएको छ । बानियाँ भन्नुहुन्छ ‘प्याडजसरी बेलाबेलामा किनिरहनु…
दक्षिण अफ्रिकाकी ३७ वर्षीया गोसाइमे थामरा सिथोलले एकैपटक १० शिशुलाई जन्म दिएर विश्व रेकर्ड कायम
अफ्रिकाकी महिलाले एकपटकमा अहिलेसम्मकै धेरै बच्चा जन्माएर रेकर्ड बनाएकी छिन् । दक्षिण अफ्रिकाकी ३७ वर्षीया गोसाइमे थामरा सिथोलले स्थानीय प्रिटोरिया अस्पतालमा १० जना बच्चा जन्माएको उनका पती टेबोहो चोतेत्सीले बताए । त्यसमा सात बालक र…